Rastra Daily | राति मस्त निद्रामा सुत्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो गर्नुहोस्
राति मस्त निद्रामा सुत्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो गर्नुहोस्
राति सुत्दा निद्रा लाग्दैन ? त्यसको प्रमुख कारण तपाईंको जीवनशैली पनि हुन सक्छ । धुम्रपान तथा मध्यपान धेरै गर्ने र अस्वस्थ्य खानपान भएकाहरुको हकमा यस्तो समस्या धेरै हुन्छ । तर, स्वस्थ्य जीवनशैली भएका व्यक्तिमा पनि निद्रा नलाग्ने कारण छ भने त्यसमा कुनै वास्तु दोषको पनि असर हुन सक्छ ।
चिनियाँ शास्त्रमा आरामदायी निद्रा ऊर्जालाई एकत्रित गर्ने माध्यम हुने बताइएको छ । जुन स्थानमा दिनचर्याको एक तिहाइ समय व्यथित गर्छौं, उक्त स्थानमा यस प्रकारको शयन कक्षको व्यवस्था हुनु हो भने हामी घोडा बेचेर चैनको निद्रा लिन सक्छौँ । शिथिलतालाई कम सक्छौं ।
शयन कोठामा फूलको उपयोग
फेन्ग शुईमा फूलबाट अग्नि तत्वको ऊर्जा उत्पन्न हुने मानिन्छ । त्यसैले शयक कक्षमा फूललाई राख्न उचित हुँदैन । शयन कक्षमा फूल रहेको अवस्थामा राम्रो निद्रा लाग्दैन । यद्यपि, दाम्पत्य जीवनमा नैरसता या रोमान्समा कमीको प्रतित भएमा शयन कक्षमा फूल उपयोगी सिद्ध हुन सक्नेछ ।
तपाईंको सुत्ने स्थानको ठीक माथि पानीको ट्यांकी रहेको छ भने त्यसबाट तपाईंको जीवनमा पृथकता, स्थिरता, निराशात्मकता, अकर्मण्यता, चिसोपना आउने आशंका रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा तपाईंले घरको छत मुनी कृत्रिम छत अथवा कपडा, काठ आदि लगाउनु उचित हुनेछ । यस्तो कुनै वस्तु लगाउनु होस्, जुन तपाईंको पलंगमाथि रहोस् । लामखुट्टे झुल लगाएर सुत्दा पनि आफु सुत्ने स्थानमाथि पानी ट्यांकी हुँदा पर्ने प्रभावको दुष्परिणाममा कमी आउने छ ।
आलिङ्गनयुक्त चित्रको प्रयोग
तपाईंको सुत्ने कोठामा स्नेह झल्काउने चित्रहरुको प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । एकअर्कालाई माया गरिरहेका हाँसका जोडी, आलिंगनयुक्त माछा, अन्य पंक्षी या पशुको चित्र जो हिंस्रक नहुन्, आपसमा स्नेहको मुद्रा झल्किएका तस्बिर राखेमा तपाईंको निद्रा आनन्ददायी हुनेछ ।
यस्ता वस्तु नराख्नुहोस् शयन कोठामा
सुत्ने कोठामा जल तत्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री या झल्काउने सामग्री राख्नु उपयुक्त हुँदैन । नदी, समुद्र तथा जल स्रोत चित्रित कुनै पनि तस्बिर नलगाउनुहोस् ।
द्रव्य पदार्थले भरिएका सामग्री पनि सुत्ने कोठामा नराख्नुहोस् । अर्थात राखी हाले पनि अत्यन्तै कम राख्नुहोस्, जस्तै दुग्ध, शर्बत तथा रक्सीको बोतल । एजेन्सी
मोडलिङमा जम्दै श्रृजना किराती
एनआरएनए मलेसियामा अध्यक्षमा विनोद थापा, महासचिवमा रन्जीत क्षेत्री
सेक्सी फोटो र भिडियो सेयर गर्छिन् शर्लिन